I-Illinois Dispensary Licence Application 2020 - Ungayithola Kanjani Nezidingo
I-Illinois Adult Use Cannabis Dispensary Licence Application
Ufuna Ukuvula Isaphulelo?
yonke imikhandlu edinga ilayisense
Izicelo Zamalayisense Wokuthola Izicelo ze-Illinois ngo-2020 kwahlanganiswa ingxenye ngayinye kwezingama-30 zesicelo selayisense senhlangano esinemibandela yabantu abadala, kodwa qedela leso sicelo ngokugxila kumaphoyinti angama-250 atholwe yi-State of Illinois kubafakizicelo bezindawo zokuhlinzeka. Ithimba lakho le- ilayisense yokusebenzisa abantu abadala kubaluleke kakhulu ngoba izici eziningi zokuthola amaphuzu zizodinga iqembu elihlukahlukene, mhlawumbe lihlanganiswe enkampanini enomkhawulo wezikweletu.
Izicelo Zase-Illinois First Round Zezikhalazo Ziphelelwe Ekumangalelweni.
FUNDA KABANZI: Ukubikwa Kwamalungelo Amalayisense E-Illinois Cannabis.
Izicelo zisalinde ukuthola amagoli avela ku-KPMG nokuxazululwa kwamacala. Qalisa manje kumjikelezo 2 futhi uzobe usukulungele lapho kukhishwa amanye amalayisense ayi-110 ama-Illinois Cannabis Dispensaries ngo-2021.
I-Illinois Dispensary Application 2020 PDF
Kanjani Izicelo Zasemtholampilo atholwe e-Illinois ngo-2020:
Ukufaneleka kohlelo lokuQashwa kwabasebenzi (Amaphuzu ayi-15)
Ukuphepha Nokugcina Amarekhodi (Amaphuzu angama-65)
Uhlelo lwebhizinisi, lwezezimali, uhlelo olusebenzayo kanye neplani yaphansi (65 Amaphuzu)
Ulwazi nesipiliyoni se-cannabis noma amasimu ahlobene (Amaphuzu angama-30)
Isimo njengoMenzi Wezicelo Zokulingana Komphakathi (Amaphuzu angama-50)
Izenzo Zabasebenzi Nokuqashwa (amaphuzu angu-5)
Umnikazi we-Illinois (amaphuzu 5)
Isimo njengeVeteran (amaphuzu angu-5)
Uhlelo Lokwehluka (amaphuzu 5)
Amaphoyinti ama-2 amabhonasi uma kukhona izibopho zoHlelo Lokuhlomula Komphakathi
Funda umbhalo uqobo womthetho osebenzisa abantu abadala osebenzisa imishanguzo -> Umthetho we-IllInois Adult Use Dispensary Law
Uyithola Kanjani Ilayisense YezeCanabis Dispensary e-Illinois?
IMP: Uneqembu elikhulu lelayisense lakho le-cannabis dispensary - okubandakanya ukulingana kwezenhlalo, imali, isipiliyoni, nomphakathi - kanye nommeli omuhle kanye ne-accountant - futhi usebenza kanzima futhi usebenzise imali edingekayo ukuthola indawo yokulungiselela ukuvula ngebhizinisi. Ibhajethi engaphezu kwe- $ 100,000 yenqubo yokufaka isicelo iyodwa. Bese unethemba lokuthi unesicelo esihle kakhulu, khetha i-lottery.
Mangaki Amalayisense Dispensary Akhona e-Illinois?
ngo-2020 Illinois inikezela ngamalayisense amasha we-cannabis disensary
ngo-2021 i-Illinois inikeza amanye amalayisense e-cannabis 110 e-cannabis
ama-cannabis dispensaries angokwedlule angenza enye i-110 cannabis dispensaries.
Akungasho lokho kwezomthetho insangu yokuzijabulisa nezokwelapha e-Illinois ngokungangabazeki kuzoholela ekwandeni kokusetshenziswa kwemikhiqizo yensangu. Emizameni yokuqinisekisa ukuthi amaklayenti athola inani lemali, futhi imikhiqizo yensangu ayihlali ezandleni ezingafanele, umbuso uqhamuke nemithetho eyahlukahlukene yokuphatha izikhungo zensangu e-Illinois. Isicelo selayisense lokuzilibazisa e-Illinois kufanele sihambisane nabo.
Abafisa ukukhipha imikhiqizo ye-cannabis kumele balandele umthetho. Noma ngubani ongasebenzi ngokulandela umthetho uzobhekana nemiphumela elukhuni.
Ngezansi, sibheka imininingwane yalokho okusha I-Illinois cannabis imithetho ye-dispensary. Ake singene phakathi, angithi?
Izicelo Zokufaka Izicelo Zokuhlaziywa Kwama-Illinois Kufanele Zithole Umhlobiso Ohlukahlukene Wentyatyambo yeCannabis
Ngokomthetho omusha wase-Illinois, ama-dispensaries kudingeka ukuthi anikeze "i-assortment yemikhiqizo evela kumalayisense ahlukahlukene okusungulwa kwebhizinisi le-cannabis lapho ukuthi i-yokusungula etholakalayo ithengiswa kunoma iyiphi i-dispensary kusuka kunoma yisiphi isikhungo sokulima esisodwa, umlimi wezandla, umshini weprosesa, noma inkampani engeneleli ngaphezu kwe-40% yempahla ephelele etholakalayo ”.
Lokhu kuzosho ukuthi abathengi bazoba nezinhlobonhlobo ezanele abangakhetha kuzo esikhungweni esisodwa. Kubuye kunganciphisi izikhungo zokutshala kanye nabanye abalimi ekusunguleni izikhungo zabo zokuphakela lapho begcina khona imikhiqizo yabo kuphela. Encwadini efanayo, i-dispensary nayo ayivunyelwe ukwenqaba imikhiqizo yesitoko evela kubalimi noma kubalimi abahlangabezana nezidingo ezimbalwa.
Basebenza Kanjani Abaphethe Amalayisense E-Cannabis e-Illinois
Izitifiketi zeCannabis Dispensaries ezinelayisensi e-Illinois ngeke zivunyelwe ukusebenzisa ama-drive-windows noma ukusabalalisa noma yimiphi imikhiqizo ye-cannabis emshinini wokuthengisa. Futhi zizokwenqatshelwa ekunikezeni izinsizakalo zokulethwa kwemikhiqizo ye-cannabis. Zonke izinkampani zemisebenzi kuzodingeka ukuthi zibhekwe ngokusebenza nendawo ezisebenzayo zokuthengisa. Wonke ama-dispensary kufanele futhi abe nabantu okungenani okungenani abasebenza kulo lonke amahora alo okusebenza.
Ngenkathi ama-dispensaries akwazi ukufaka imikhiqizo ehlukahlukene ye-cannabis, ngeke avunyelwe ukuthi "Thengisa ama-clones noma enye into ethize yesitshalo bukhoma". Ngaphezu kwalokho, yonke imikhiqizo izothengiswa ngawodwana, hhayi ihlanganiswe ndawonye ngentengo eyodwa. Umkhiqizo ngamunye "kumele ukhonjwe ngokuhlukile ngobungako kanye nentengo irisidi".
Yini okudingeka uyenze e-dispensary e-Illinois?
Isisebenzi sasemtholampilo kuzodingeka siqeqeshwe ngemithetho yensangu nezinyathelo ezibekiwe ukuqinisekisa ukuphepha. Izinyathelo ezinjalo zokuphepha zifaka ukugcinwa kwamabhuku okufanele, ukuphepha ukuvimbela ukwebiwa kwemikhiqizo ye-cannabis, kanye nohlelo olulandelela wonke amasheya aze athengiswe.
Umthetho uthi i-dispensary ngayinye kumele ibe nohlelo oluphelele futhi "uhlelo lokuphepha luzocacisa nokuthi iyiphi inkontileka yezokuphepha yangasese enikezwe ilayisense ngaphansi kwesigaba 10-5 se-Independent Detector, Private Alarm, Private Security, Fingerprint Vendor, and Locksmith Act of 2004" ukuhlinzeka ngezokuphepha emagcekeni esabelweni.
Uhlelo lwebhizinisi lokuhambisa luzoba nomhlahlandlela oningiliziwe wokuthi isitolo sizophathwa kanjani esikhathini esifushane nangesikhathi eside. "Uhlelo olusebenzayo luzobandakanya, okungenani, izindlela ezingcono kakhulu zokusebenza nokusebenza kwabasebenzi nsuku zonke".
The I-Illinois Adult Use cannabis dispensaries futhi kuzodingeka ukuthi iveze ukuthi ihlela ukuphatha kanjani abasebenzi bayo. Amaphuzu amaningi azonikezwa izikhungo ezihlela ukunikeza ngemibandela engcono kanye nendawo yokusebenza efanelekayo kubo bonke abasebenzi bayo.
Imigomo Elawula Ilayisense Yabantu Abadala base-Illinois Basebenzisa Ukuvalwa Kwezindawo Zokufunda zeCannabis
Zonke izinkampani zezimali kuzodingeka ukuthi zazise ngokushesha umnyango wezamalayisense uma zingafisi ukuvuselela ilayisense labo lokusebenza. Isikhathi esivunyelwe salesi saziso okungenani izinyanga ezintathu ngaphambi kosuku lokuvalwa.
Abadaluli bazodingeka ukuthi basebenzisane nomnyango olawula amalayisense ukusungula uhlelo lokuvala izikhala. Lolu hlelo "lubheka, okungenani, ukudluliswa kwamarekhodi ebhizinisi, ukudluliselwa kwemikhiqizo ye-cannabis, nanoma yini enye uMnyango eyibona idingeka".
Ukulawulwa kwe-Illinois Cannabis Dispensaries kunomthelela kwizicelo zayo
Umthetho wendawo, amaphoyisa, kanye nomnyango wokuhlinzekela amalayisense bazoba nelungelo lokwenza ukuhlolwa okungahleliwe okungaxhunyiwe kunoma iyiphi indawo okuyi-cannabis state. Ngaphezu kwalokho, izikhulu zokuqinisa umthetho zizoba nelungelo lokuthola yonke imikhiqizo ehlobene ne-cannabis, izinto zokwakha, kanye namarekhodi.
Uma kwenzeka kunezinsolo lapho i-dispensary kusolwa ukuthi yephule umthetho, umnyango ungaphenya '' umfakisicelo, imininingwane yesicelo, inhlangano yokuhambisa izikhulu, umphathi omkhulu, umenzeli wokuhambisa imali, umthengisi wesithathu, noma omunye umuntu ohlobene naye nenhlangano esabalalisa izinto ”.
Ukujeziswa Kwezedephenari zase-Illinois Cannabis ngokwehluleka ukulandela umthetho
Ngokusho komthetho omusha we-Illinois Cannabis Act, "uMnyango ungakhipha izikhalazo ezingekho emthethweni mayelana nokuphula umthetho okuncane". Lokhu kucashunwa kungaheha inhlawulo engakwazi ukweqa u- $ 20,000 ngakho konke ukwephula. Umbhalo uzokhokhiswa kumuntu ophethe ilayisense lokuhambisa. Umnikazi welayisensi angacela ukulalelwa kungakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela ngosuku okuhanjiswe ngalo umbhalo. Lapho lesi sikhathi sesidlulile, ukucaphuna kuzoba okokugcina futhi akunakuphikiswa ngakho.
Umthetho uyacaca ukuthi uMnyango onamalayisense kungenzeka "wenqabe ukukhishwa, wenqabile ukuvuselela noma ukuvuselela, ukusola, ukubeka endaweni yokuqashwa, ukumiswa, ukuhoxiswa, noma ukuthatha ezinye izinyathelo zokuqondiswa kwezigwegwe noma zokungalawulwa". Ezinye zezindlela ama-disensens angaphula umthetho afaka:
Ukuphathwa kabi kwemininingwane kuhanjiswa emnyangweni onamalayisense
Ukuthola ilayisensi yensangu ngezindlela zokukhohlisa
Iphethini ekhombisa ukungakwazi ukusebenza ngendlela i-dispensary ephatha ngayo ibhizinisi layo
Ukwephulwa kwesenzo se-cannabis nemithetho
Ukuzibandakanya ekuziphatheni okungenasimilo okungalimaza umphakathi. Noma ngubani emphakathini angabika noma yikuphi ukungaziphathi kahle okwenziwa yi-dispensary, futhi izikhulu zomthetho zizokwenza ingxenye yazo ukuphenya amacala abhekene nawo.
Umnyango ungaphinde ukhethe ukukhetha ukumisa ukusebenza kwe-dispensary. Ngemuva kokuthi kukhishwe isaziso sokumiswa, umnikazi welayisensi uvunyelwe ukucela ukulalelwa kungakapheli izinsuku ezingama-45. Uma umnyango ungasihloniphi lesi sicelo, ilayisense elimisiwe libuyiselwa ngokuzenzakalelayo uma sekudlule izinsuku ezingama-45.
Yini Izidingo Zokuqalisa Isephulelo seCannabis Dispensary e-Illinois?
Ngaphandle kokuthola ilayisense yokusebenza, kunezinye izimfuneko zamalayisense e-Illinois ukuthi labo abafisa ukusungula ama-dispensaries bazodingeka ukuba bafeze. Ezinye zalezi zidingo yilezi:
Iziphathimandla ezinkulu kufanele zifakaze ukuthi zinolwazi ngemikhiqizo ehlukene ye-cannabis abahlela ukuyikhipha
Kufanele ube nohlelo oluphelele lwebhizinisi olukhombisa ukuthi i-dispensary izosebenza ngokuya ngomthetho.
Abafakizicelo bokulingana kwezenhlalakahle bazofinyelela kumaphoyinti angama-50 uma bengafakazela ukuthi bahlangabezana nezimfuneko zelayisense yokuhlinzeka nge-Illinois kulesi sigaba. Abafakizicelo be-equity equity nabo bangafanelekela ukuthola uxhaso kwikiti elibekelwe ukuxhasa amabhizinisi e-cannabis.
Songelwa Izicelo Zokufaka Ilayisense Yabantu Abadala Ese-Illinois
Kukhona onakho! Ukwephulwa kwemithetho entsha ye-Illinois cannabis dispensary imithetho ezolawula izikhalazo zensangu iza ngoJanuwari 2020. Ngenkathi le mithetho ivela njengegunyaziwe, bavikela bonke ababambiqhaza embonini yensangu, kubandakanya abanikazi be-dispensary kanye nabathengi bensangu.
Uma unesifiso sokuqala i-cannabis dispensary, kufanele ucabangele ukukhuluma nommeli onolwazi ukukusiza uqonde umthetho futhi ukuqondise ekusetshenzisweni kwelayisense yakho yabantu abadala e-Illinois.
Ungayithola Kanjani Ilayisense Yakho Yokusabalalisa In Illinois
Nawu umbhalo ovela kuvidiyo ne-podcast;
Welcome, NginguTom - ngithole ngokuhamba ngommeli weCannabis. Isisetshenziswa esiku-inthanethi sayo yonke imibuzo yakho mayelana nokuzulazula embonini ye-cannabis - njengesihloko sanamuhla esithandwa kakhulu e-Illinois - amalayisense amasha okuhambisa. Sizobhala ngezicelo ezizolekelela abafikeli abasha abangafika kwabangu-500 emakethe yokuhambisa insangu e-Illinois eminyakeni ezayo.
Ukusiza abantu bathole lolu lwazi mayelana nokuthi bangayithola kanjani ilayisense yenhlangano yokusetshenziswa kwabantu abadala (lelo igama ngempela - ngaphansi isigaba 15-25 soMthetho omusha wokusetshenziswa kwabadala i-Illinois Adult - shaya okuthandwayo futhi ubhalise. Ngeke sigcine ngokufaka isicelo kuphela, kodwa nokuthi sizuzwa kanjani ukuze kuthuthukiswe amathuba akho okukhethwa.
Qiniseka ukuthi ubuka kuze kube sekupheleni ngoba kulapho-ke lapho ngizokutshela khona ukuthi mangaki ama-dispensaries azovulelwa ibhizinisi ngoJanuwari 1, 2020. - nokuthi yiziphi izinhlobo ezimbili zazo ezikhona.
Futhi manje konke okudingeka ukwenze ukuthola ilayisense lakho lokuhambisa e-Illinois.
Umnyango Wezolimo - uyimpoqo - khipha amalayisense amasha okufika ku-75 ngoJulayi 1, 2020. Futhi ngoDisemba 21, 2021, uMnyango wezoLimo uzokhipha amanye amalayisense asebenzisa abantu abadala abanemibandela ayi-110 anemibandela. Ngemuva kukaJanuwari 1, 2022, isimo esinemibandela semikhandlu siba unomphela - kepha asikwazi ukweqa izikhungo ezintsha ezingama-500 esifundazweni. Ngaphandle kokuthi kudingeke ukunikezwa okuningi. Okuningi kulokho kwamanye amavidiyo.
Ngakho-ke, ake sikhulume ngalokho okufanele ungene kulawo ma-application kwelayisensi we-wave yokuqala yezimo zokusebenzisa abantu abadala ezinemibandela.
Okokuqala - umthetho uhlinzekela ukuhlakazeka ngokwezindawo zemishini. Nalu uhlu lokuthi ngubani othola ini ngegagasi lokuqala - mhlawumbe ungabona ophuma phambili noma ababili, kungani ibloomington ithola eyodwa kuphela lapho i-peoria ithola u-3 - thina sipholile nje kunabathengisi bomshuwalense - futhi nendawo yaseChicago ithola ama-47.
Ukwehlisa umugqa kuSigaba 15-25 - sifika kuzidingo zohlelo lokusebenza. Ngaphambi kokuthi sidlule kulokho - sicela uqiniseke ukuthi ubheka lokhu ngelensi yokuthi uhlelo luzotholwa kanjani. Ngakho-ke - siqala ngeSigaba 15-30 (c) somthetho wensangu.
Kuzonikezwa amaphuzu angama-250 kuzicelo eziphelele - bese uMbuso uqoka abawinile. Nali iphuzu elikhulu - Ukuphepha nokuqopha Ukugcina amaphuzu angama-65. Kunjalo ngaphezu kwamaphuzu akho angama-25% avela kwezokuphepha nokugcinwa kwamarekhodi - futhi ngibonile amanye amarekhodi amaklayenti, amarekhodi akho mahle kangakanani - uJeffery? Kumfana ogama lakhe linguJeffery ubukele lokhu - ngiyethemba ngikukhiphile.
Kubaluleke kakhulu njengoba Ezokuphepha nokugcinwa kwamaRekhodi yiBusiness Pla, uhlelo lwezezimali, uhlelo lokusebenza kanye naphansi - amaphuzu angama-65. Sizokwenza amavidiyo kwabanye abahlinzeki balezi zinsiza ezindabeni zethu zokugunyazwa kwe-cannabis - ngakho-ke shaya inkinobho yokubhalisa ukuze uvumelane nalokho, futhi uma ukulo mkhakha ngolwazi lwala maphuzu - zizwe ukhululekile ukungivakashela embonini ye-cannabis mmeli bese ungishayela ucingo.
Manje manje nangaphezulu U-50% wamaphoyinti anikezwe amalayisense e-cannabis dispensary, siphendukela entweni elandelayo ebaluleke kakhulu kuhlelo lwakho lokusebenza. Isimo Sokufaka Isicelo Sokulingana Komphakathi - Vulela ividiyo yethu ngalokhu kuwa. Kubiza amaphuzu angama-50. Besihlala sisho ukuthi i-cannabis ngumdlalo weqembu futhi ilungu elikhulu leqembu emakethe yezomthetho yensangu yase-Illinois ukulingana kwezenhlalo - 20%
Okulandelayo, siya ku-3Amaphuzu ayi-0 oLwazi ne-Experience embonini - kubalulekile ngoba ikhwalithi yomkhiqizo kuhulumeni ithuthuke kakhulu eminyakeni emi-2 edlule engibe nekhadi lami futhi abanye abakhiqizi abahle kakhulu bakhona laphaya manje - futhi ngicabanga ukuthi ubuciko obukhulayo buzoletha okuningi - futhi kukhona ukugqagqana phakathi kobuciko kuyakhula nemishini yokuhlinzeka ngakho-ke funa lokho kusebenzisana.
Ngaphambi kokufika ezindabeni ezixubile, iphoyinti lokugcina elinamadijithi amabili yi-Employee Training Plan - ebiza amaphuzu ayi-15. Lokhu kuyadingeka futhi ngaphansi kohlelo lokusebenza - futhi esinye sezizathu ezizobiza kakhulu ukuzihlanganisa. Khumbula ukuqeqesha abasebenzi ukuthi baqonde imithetho nemithetho - ungazise uma ufuna usizo ngalezo zinqubomgomo.
Kulungile. ake sibone - amahlandla angama-60 2 + 50 + 30 + 15 = 215, yingakho ngibiza amaphuzu angama-35 asele ngokuxubile.
Imikhuba Yezabasebenzi Nokuqashwa - amaphuzu amahlanu
Uhlelo Lwemvelo - amaphuzu ayi-5
Umnikazi we-Illinois (51%) - amaphuzu ayi-5
Umakadebona wayenamaphuzu angama-51% - 5
Uhlelo Lokuhlukahluka - amaphuzu angu-5 namagama angama-2,500 XNUMX
Lapho uya ngamaphoyinti angama-250 - kepha kunikezwa amaphuzu amabhonasi ama-2 ngohlelo lokuzibandakanya nomphakathi - amaphuzu angama-252 max. Ngiyethemba uzithola zonke.
Esikhundleni sokudabula into ngayinye kwezingama-30 zelayisense lokusebenzisa abantu abadala elinemibandela - ngifuna ukuqeda le vidiyo ngaphansi kwemizuzu eyi-10 ukuze ngiyithumele I-Linked'in nalo mbhalo njengo “athikili” abawuthandayo - kuyipulatifomu ehlukile kuneyouTube - kepha uma ufuna ukungilandela kuxhumene nephrofayili yami kuxhunywe encazelweni.
Into eyodwa engekho ezintweni ezingama-30 - ikheli - uma ukhethwa unezinyanga eziyi-6 zokunikeza izwe ikheli lakho.
Manje mingaki imitholampilo ezovulwa ngoJanuwari 1? Phakathi kuka-55 no-110. Imitholampilo yezokwelapha yamanje engama-55 inethuba lokuyivulela ukusetshenziswa kwabantu abadala ngisho nendawo yesibili. Angisakwazi ukulinda ukubona izinombolo ziza ngoJanuwari.
Ngiyabonga ngokungijoyina kulesi siqephu - khumbula, ukugunyazwa kwensangu kusele izinyanga ezimbalwa kuphela - ngakho-ke qala ukuhlanganisa amacebo akho ukuze uthole izikhungo zokuthenga nokuthenga bese ubhalisa kuze kube yimanje. Futhi uma udinga usizo lwami, vele u-google ummeli we-cannabis bese uthintana nami. Sizobonana maduze.
Bhalisela i-Cannabis Legalization News Lapha